Chili: Adihevitra nateraky ny famoahan’ny fiangonana Katolika Siliana tolo-dalàna mikasika ny famotsoran-keloka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Aogositra 2010 4:49 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Português, srpski, Español
Ampahany amin'ny fankalazana ny faha roanjato taonan'ny repoblika, ny famoahan'ny fiangonana katôlika Siliana tolo-dalàna [es] mikasika ny tokony hamelana ny helok'ireo olona sasany izay voaheloka nohon'ny fanitsakitsahana ny maha-olombelona . Hoy ny nambaran'i Eveka Goic momba izany,
Ny fangatahanay dia sady tsy manafoana no tsy manohitra ny fanmanjakàna ny lalàna sy ny fahamarinana fa vao maika aza mila sy mitaky izany. Ny tiana hambara dia izao, raha toa ka te hampanjaka ny fahamarinana isika –[dia] tsy misy tsy ara-drariny indrindra noho ny tsy fanomezana sazy– ary amin'izany fitandroana ny fitsipika feno mikasika ny zon’ olombelona izany raha eo amin'ny sehatry ny heloka manitsakitsaka ny maha-olombelona no jerena, dia mihevitra izahay fa tokony hanao dingana isika mankany amin'ny famindram-po, miaraka amin'ny fanarahana hatrany ny fitsipi-dalàna, ny lalàm-panorenana sy ny fifanarahana iraisam-pirenena izay manankery ankehitriny.
Ny tolo-dàlana – nambara narahana adihevitra momba ny fanendrikendrehana an'i pretra Karadima ho nanao fanararaotana ara-nofo tao Santiago– dia nalefa tany amin'i Filoham-pirenena Piñera mba ho hadihadiany sy hakana ny fankatoavany, ary niteraka adihevitra lehibe teo amin'ny sehatra politika izany. Indrindra indrindra moa eo amin'ny mety hisian'io famotsoran-keloka io ho an'ireo olona voaheloka tsy isalasalàna noho ny fanamavoana ny zon’ olombelona nandritry ny fotoana nisian'ny didy jadona nataon'i Augusto Pinochet.
Io famotsoran-keloka io dia efa fitaovana raikitra nampiasain'ny fitsarana tao Chili hatry ny ela. Hoy ny praofesora Marcelo Brunet [es]:
ny famotsoran-keloka omen'ny filoham-pirenena dia efa anisan'ny fanehoana fanangonam-pahefana hatrany amin'ny fitondram-panjaka , fanjakàna mirona mankany amin'ny didy jadona sy ny fanamparam-pahefana, izay tsy hay hazavaina amin'izao taonjato faha XXI izao.
Amin'ny ankapobeny, io soso-kevitra io dia neken'ny antoko politika sasany fotsiny ao amin'ny governemanta fampiraisam-pirenena [es].
Nanohitra tanteraka an'io tolo-dalàna io ny fikambanan'ny fianakavian'ireo gadra tsy hita. Hoy ny nambaran'i [es] Mireya García, filoha mpanampy ao amin'io fikambanana io:
Io tolo-dalàna avy amin'ny fiangonana io dia tsy nahilikilika akory fa vao mainka aza noraisina, satria efa nolazaina tamin'ny fomba diplômatika, nefa kosa raha miresaka famelana ny heloka izay manitsakitsaka ny maha-olombelona isika dia izany hoe mety hahazo famotsoran-keloka koa izany ireo mpanamavo ny zon’ olombelona ireo. Hita mazava tsara izany fa miteraka alahelo goavana io tolo-dalàna io.
Tamin'ity herinandro ity, ny tontolon'ny blaogy Siliana dia namoaka lahatsoratra maromaro izay nahaliana tokoa mikasika indrindra io resaka io. Manohitra io tolo-dalàna io i Rodrigo Mora ao amin'ny Blog de la República [es] , hoy izy manazava izany,
Tsy dia mety loatra ho an'i Piñera ny fandeferana eo anatrehan'ny hadisoana lehibe vokatry ny tsy fahamailoana toy izao. Mety hahavita hadalàna faran'izay ratsy ireo mpiziriziry sy mifikitra irery amin'ny heviny mikasika ny zon’ olombelona avy amin'ny hery ankavanana : toy ny famerenana ny fanahin'ireo efa maty sy famadihana fatin'olona maromaro izay noheverina fa efa nalevina fa tsy nanjavona.
Nanoratra ho an'i El Quinto Pode [es] momba ny tsy fisian'ny fifandraisana eo amin'ny fankalazana ny faharoanjato taonan'ny firenena sy ny famindram-po ho an'ireo izay nahavita heloka bevava, i Héctor Salazar, mpahay lalàna momba ny zon'olombelona:
Tsy misy mampiahiahy mihitsy ny filazana fa ny famotsoran-keloka izay ambaran'ny lalàna dia midika fanaovana sorona ny fahamarinana, ary izany dia mampanjaka hatrany ny maha-tsimatimanota ireo meloka ka mampikorontana ny fiainam-piaraha-monina, raha ny tokony ho izy anefa dia tokony hampanjaka ny filaminana izany hoe ny mitranga izany dia ny mifanohitra amin'izay nolazana fa katsahna: filaminana sy ny fandriampahalemana.
Manohitra io tolo-dalàna avy amin'ny fiangonana io ihany koa ny mpitoraka blaogy Julio Suárez [es], hoy izy manao hoe,
Ao Chili, mbola tsy tapitra voasambotra sy voahenjika ary nampidirina am-ponja daholo ireo nahavanon-doza meloka nohon'ny fanimbazimbana ny mahaolombelona. Ary maro tamin'izy ireo no nahazo sazy maivana dia maivana. Ankehitriny, havela ve ny helok'izy ireo? Ny fanazavana azo dia ny hoe efa antitra izy ireo. Marina izany, mpamono olona tratra antitra, fa tsy hoe “olona tsara fanahy tratra antitra”. Mba saintsaino anie e, raha ny momba ny fanazavana naroso hoe “lehilahy marary no sady antitra,” dia ho avotsotra izany i Paul Shaefer, nohon'ny famelan-keloka?
Ireo mpanohana an'io tolo-dalàna io dia ireo fikambanan'ny miaramila efa misotro ronono [es], izay niray feo tao anatin'ny fanambarana nataony fa,
Manantena ihany koa izahay fa handray fanapahan-kevitra tsara sy marina amin'io sehatra manan-danja izay mihatra amin'ny fanahin'ny firenena io ny Filohan'i Chili amin'izao fotoana izao, ka ho ataony laharam-pahamehana amin'izany ny fanehoany ny toerany dia ny maha olona manam-pahefana azy, izany indrindra no tena ilain'ny firenena mba hiatrehana ny fidirana amin'ny zato taona fahatelo, mila manalavitra ny faneriterena izay tsy ara-drariny avy amin'ireo tia tena mikasa ny hampanjàka ny fankahalana sy ny fizarazaran'ny vahoaka siliana noho ny tombontsoany manokana ihany koa ny Filoham-pirenena ankehitriny.
Tamin'ny Alahady, nilaza ny fanapahan-keviny farany momba io tolo-dalàna io, ny Filoha Sebastián Piñera, hoy izy [es],
sady tsy mety no tsy malina amin'izao fotoana iainatsika izao ny famoahana lalàna vaovao mikasika ny famelan-keloka faobe.
Na izany aza, nanambara izy fa mety hampiasa ny fahafahany amin'ny mahafiloha azy izy eo amin'ny famelan-keloka fa izany kosa dia ataony “am-pitandremana sy amin'ny fametrahana fetrany” noho ny antony mahaolombelona, miaraka amin'ny fanavahana ireo olona voaheloka nohon’ ny heloka bevava vitany, tafiditra anatin'izany ny zon’ olombelona, ny asa fampihorohoroana, ny fanapariahana zava-mahadomelina, ny fanerena olona an-keriny eo amin'ny ara-nofo, famonoan'olona sy fanararaotana zazakely. Notohanan'ny [es] antoko politika siliana maro samihafa io fanambaran'ny filoham-pirenena io. Nandalina momba izany i Carlos Moffat, tao amin'ny Blog de la República [es]:
Raha te haneho hatrany fiaraha-misalahy eo amin'ny fikasana ny fandriampahaleman'ny mponina sy ny fitadiavana varavarana fivoahana efa taona maro tamin'ny fotoanan'ny fampielezan-kevitra teo amin'ny sehatra politika isika dia toa hita fa mifanohitra amin'ny foto-kevi-dehibe ny ‘famelan-keloka faobe’ . Ary mikasika io fiaraha-misalahy io ihany, na dia maro aza ireo mpikambana ao dia tokony hisy fifanarahana mazava tsara anjakan'ny marimaritra iraisana eo amin'ny firenena momba ny fanajàna ny zon’ olombelona, ny famotsoran-keloka ho an'ireo [izay ao anatin'ny] tafika [ voarohirohy ho nanitsakitsaka ny zon’ olombelona] dia mety nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny sehatra ara-politika, izay tsy nahitana tombontsoa [mihitsy].
Sary anjorony tao amin'ny Flickr an'i adri021 nampiasàna ny Creative Commons license.